Iintlawulo - ii-Buddhatrends
Ndiyesaba kuba ngoku imisebenzi yethu iphela kumashishini okuthenga ngetyala / debit kunye ne-Paypal. Oku kukuqinisekisa ukuba abathengi bethu bafumana ukhuseleko lwabathengi kunye noshishino lwethu luqinisekisiwe. Kwixesha elizayo siyakwazi ukwamkela imali kwi-delivery. Ukuba awunayo nayiphi na indlela yokuhlawula njengoko kuchaziwe mhlawumbi unokufumana umntu ekuncedeni ngenkokhelo yokuqala :)
Ukuba unayo i-akhawunti ye-PayPal, khangela nje nge-Paypal kwaye ungene ngemvume ukugqiba ukuthenga kwakho ngokufanelekileyo.
Ungakhathazeki njengoko akudingeki ukuba ube neakhawunti ye-PayPal ukuhlawula: ungangenisa idatha yekhadi lakho lesikweletu ngokukhawuleza kwi-PayPal uze uzalise inkokhelo yakho. WenaAkudingeki ukuba ubhalise i-akhawunti ye-PayPal.
Ukuba iphepha lakho le-PayPal libukeka ngale ndlela, nqakraza kwi "Pay with Debit okanye Credit Card" okanye "Khangela nje ngeNdwendwe".